Ịkwadebe na ijikọta risotto - nke a bụ otú oke risotto si eme
Kedu ihe a ga - ejikọta na nkwadebe nke risotto?
Njehie iji zere mgbe ị na-akwadebe risotto
Ọtụtụ ndị na-achọ ịnwa nri ọhụrụ ugboro ugboro iji mee ka ụdị nri ha na-eri kwa ụbọchị. Achịcha na-ewu ewu na ọtụtụ kichin nke onwe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ Risotto. Ihe osikapa osikapa nwere ike buru ndi mmadu nani n'ihi na i nwere ike igbanwe ya nke oma ma sie ya uto.
Kedu ihe bụ risotto ọ bụla?
Risotto si n'ebe ugwu Itali na osikapa mushy mushy. Ezi risotto bụ ezigbo creamy, mana osikapa ka bụ "al dente".
Ezigbo risotto na mushrooms, herbs ọhụrụ na Parmesan
Nkwadebe siri ike dị nnọọ mfe: N'ebe a, osikapa a na-ejighị anụcha na-ejikọta ya na eyịm na obere butter ma ọ bụ mmanụ ma sie ya na efere ruo mgbe efere dị oke.
O doro anya na a ghaghị ilezi anya osikapa. Ọ bụghị ụdị osikapa nile dị mma maka nkwadebe nkwadebe osikapa a. A na-ejikarị osikapa ala ala eme ihe, ebe ọ na-emepụta starch zuru ezu, bụ nke na-ahụ maka ụdị mkpụrụ osisi ahụ.
N'aka nke ọzọ, nsị sriisị adịghị mma ma ọ bụrụ na ọ na-esi nri ngwa ngwa ma na njedebe adịghị ike maka efere a. Risotto nwere ike ijere ma ọ bụ dị ka isi ihe ma ọ bụ dị ka ihe nkwado na ọtụtụ anụ efere.
Enwere ike ịkwadebe Risotto n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ihe eji eme nri maka osikapa osikapa bu kwa ohia osikapa, erimeri, abuba na onye obula choro iwere obere mmanya na mgbakwunye mmiri. Ndị ọzọ bụ n'ezie ihe ụtọ, n'ihi na ị nwere ike inye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị na risotto.
Ngwongwo osisi na itinye ntụ ọka ntụ ọka
A na-ewu ewu karịsịa bụ Parmesan Risotto. N'ihi nke a, a kwadebere efere dịka akọwara n'elu. Ozugbo esire osikapa na ihe niile bụ mushy, tinye butter na Parmesan ka osikapa. Ị nụworị obi ụtọ a na-atọ ụtọ na Parmesan risotto.
Ọbụna a na-ahọrọ risotto ero ọka dị ka ụzọ isi ma ọ bụ nri dị n'akụkụ. N'ebe a, ị na-akwadebe ihe niile dị ka atụmatụ ma ọsụsọ na-egbu ọka na eyịm na pan. Mgbe ahụ ị na-enye ihe niile n'okpuru uka. Enwere ike jikọta Parmesan na mushrooms, nke na-adabere na uto gị.
Otu n'ime ihe mbụ kachasị njọ na-emehie na nkwadebe bụ na osikapa na-esiri ya nri ogologo oge. Nke a na-eme ka uka dị nro. Otú ọ dị, osikapa kwesịrị ka ọ bụrụ "al dente" nke mere na ọ na-eme ka ísì ụtọ ya na ụtọ nke ihe ndị ọzọ.
E kwesịghị ịsacha osikapa risotto tupu oge eruo, ma ọ ga - efunahụ ike ya na efere niile agaghị arụ ọrụ. Na mgbakwunye, ịkwesịrị ịhapụ ebe nchekwa ahụ ruo ogologo oge, n'ihi na osikapa nwere ike ọkụ ngwa ngwa ma na ị ga-emegharị n'etiti etiti.
Kedu ka esi detụ mmanya mma?
Ntuziaka Baby - Kwadoro nke ọma
Mụta ihe n'ụzọ ziri ezi - nwekwuo mkpali
Ịmụ ihe nke ọma - n'ihi na ịmụmụ ihe dị ụtọ
Mụta ihe n'ụzọ ziri ezi na map Mind
Ịmụ ihe n'oge ọ bụla
Ịmụ ihe nke ọma - mgbe ahụ onye ọ bụla nwere ike ịmụta ihe niile
Nri na thyme
Nri maka nri, ihe ọṅụṅụ na ihe ọṅụṅụ